ဥပဒေကြောင်းအခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေး တည်နေရာနှင့်နာရီများ၏စစ်ဆင်ရေးအတွက်ဖွဲ့စည်းအကြားပူးပေါင်းပြည်ထောင်စုရှေ့နေနှင့်အန္ႀကီးဌာန၏တရားအခမဲ့ဥပဒေရေးရာဆေးကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်အိမ်စာမျက်နှာပေါ်တွင်ပြည်ထောင်စုရှေ့နေ။ တည်နေရာနှင့်စစ်ဆင်ရေးနာရီအခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးအရုံး၏ဥပဒေရေးရာဝန်ဆောင်မှုတွင်တွေ့နိုင်ပါသည်အဆိုပါနေအိမ်စာမျက်နှာ၏အဆိုပါဗျူရို၏ဥပဒေကြောင်းအရ။ ရန်းလူ့အဖွဲ့အစည်း၏အနားဥပဒေရေးရာအကူအညီနှင့်အတူလူများအသန်။ ရန်းပည္ေထာင္စုပုဂ္ဂိုလ်နှင့်အတူအခြင္ေရာဂါဥပဒေရေးရာအကူအညီနှင့်အတူလူများအသန်။
ဥပဒေကြောင်းအရအကြံဉာဏ်အတွက်အခမဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားဥပဒေကြောင်းအရအကြံဉာဏ်အွန်လိုင်းရရှိနိုင်ဖို့သင်အွန်လိုင်း။ သင်ဆက်သွယ် အတွက်အကြိုဆွေးနွေးမှု၏မေးခွန်း။ မန်နေဂျာချိတ်ဆက်လိမ့်မည်အတူသင်တို့တစ်အထူးကုအပေါ်ပြဿနာရဲ့အကျိုးစီးပွား။ အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့ကကျနော်တို့ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်ဒီမှာ။ ဥပဒေကြောင်းအရအကြံဉာဏ်ကိုအဆင်ပြေတဲ့ဝန်ဆောင်မှုနိုင်ပါတယ်သောအားဖြင့်ဖြေရှင်းရန်ဥပဒေရေးရာကိစ္စရပ်များမှမထွက်ဘဲနေအိမ်။ ငါတို့သည်တည်ရှိပြီးမြို့တော်အတွက်၊သင်ဘယ်နေရာမှာမဆိုလောကအတွက်နေဆဲတစ်ဦးအရည်အသွေးအဖြေပါ။ ဘာဥပဒေကြောင်းအရအကြံဉာဏ်။ သင်ကကန့်သတ်မဟုတ်ဥပဒေရေးရာအွန်လိုင်းအကြံဉာဏ်နှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမပါဘဲ။ သင်၏အားသာချက်ယူဥပဒေကြောင်းအရထောက်ခံမှုမှာပြီးပြည့်စုံတဲ့ဥပဒေဝန်ဆောင်မှုများပါဝင်ကြောင်းအပေါ်အကြံဥာဏ်အားလုံးဥပဒေရေးရာကိစ္စများကို။ သောဒေသများပြုများကိုဥပဒေကြောင်းအရအကြံဉာဏ်. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီအတွက်အကျင့်ကိုကျင့်အများအပြားဒေသများ။ သင်ဥပဒေကြောင်းအရအကြံဉာဏ်အွန်လိုင်းသို့မဟုတ်လူတစ်ဦးအတွက်အပေါ်အောက်ပါကိစ္စရပ်များ: တစ်ရှေ့နေများအတွက်အသိမ်းကုမ္ပဏီ၏; ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကူအညီအပေါ်အခွန်အငြင်းပွားမှုများ; အကူအညီကျွမ်းကျင်သူများက၏အနုထောက်ခံမှု; ၏အကူအညီအထူးကုအတွက်ပြည်တွင်းဥပဒေ; ကျွမ်းကျင်သူအကူအညီအပေါ်ကိစ္စများ၏ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဥပဒေ; ဥပဒေကြောင်းအရအကြံဉာဏ်အပေါ်လိုင်စင်ကိစ္စရပ်များနှင့်အလုပ်သမားကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး; ဥပဒေရေးရာအကူအညီအပေါ်လွတ်လပ်ခြင်းကိစ္စရပ်များကို; ရှေ့နေတစ်ဦးအပေါ်ကော်ပိုရိတ်ဥပဒေ; ဥပဒေကြောင်းအရအကြံဉာဏ်ကိစ္စရပ်များအပေါ်တရားစွဲဆို။
အခမဲ့ရှေ့နေတိုင်ပင် ဤစာမျက်နှာပေါ်တွင်တွေ့လိမ့်မည်ထုတ်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်သူကိုကိုင်တွယ်ရန်နီးပါးမည်သည့်မေးခွန်းတစ်ခု၏ဥပဒေသဘောသဘာဝမှရှေ့နေတစ်ဦးသို့မဟုတ်အခြားပညာရှင်နိုင်ပါလိမ့်မည်သူသည္ကျွမ်းကျင်သူအကူအညီနှင့်အခမဲ့ကနဦးညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ဖုန္း။ စစ်ဆေးကျေးဇူးပြုပြီးအောက်ပါအခြေအနေရရှိရေး၏ဥပဒေရေးရာအကြံဥာဏ်ကိုအခမဲ့ဖုန်းကိုကျော်မှတဆင့်ပုံစံပေါ်တွင်တင်ထားသောအဆိုပါဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်အီးမေးလ်။ ငါပြောသင့်တဲ့ဖုန်းကျော်ကထိုအောက်တွင်»အခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေး»ဟုအဓိပဏာမစကားနှင့်အတူမန်နေဂျာဒါမှမဟုတ်ရှေ့နေ၊သိရှိနိုင်ရန်အကြောင်းရင်းများကုသမှုများအတွက်၊ကျွမ်း၏ကုန်ကျစရိတ်နှင့်အတူလိုအပ်သောဥပဒေရေးရာဝန်ဆောင်မှုနှင့်ချိန်း။
အခမဲ့ဥပဒေရေးရာအကြံဉာဏ် ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင်အဆိုပါပြည်နယ်လူမှုရေးအစီအစဉ်၏အခမဲ့ဥပဒေကြောင်းအရထောက်ခံမှုအနိုင်ငံသားများ:အခုဆိုရင်အခမဲ့ဥပဒေရေးရာအကြံပေး၊ဥပဒေရေးရာဝန်ဆောင်မှုနှင့်အခမဲ့ဥပဒေရေးရာအကြံဉာဏ်အွန်လိုင်းအကောင်အထည်ဖော်ဖုန်းပေါ်မှာလုံးဝအခမဲ့ အအကြံဥာဏ်၏တစ်ဦးပရော်ဖက်ရှင်နယ်ရှေ့နေသင်ကူညီလိမ့်မည်ရှာဖွေဖို့အတွက်ထွက်ပေါက်၊မည်သည့်အခြေအနေ. ကြုံတွေ့ခံစားရှေ့နေများနှင့်ရှေ့နေသင်အကြံပေးပါလိမ့်မယ်တွင်မည်သည့်ဥပဒေရေးရာကိစ္စရပ်များ။ အရည်အချင်းပြည့်ရှေ့နေများအသင်းပရော်ဖက်ရှင်နယ်ရှေ့နေများ၏အ ၏ရှေ့နေများကာကွယ်လိမ့်မည်သင်၏အခွင့်အရေးနှင့်အကျိုးစီးပွားကိုကူညီလိမ့်မည်ဟုနားလည်သဘောပေါက်ရန်အိုးအိမ်၊မိသားစု၊ဘဏ္ဍာရေး၊ေဆာက္လုပ္ေရး၊မြေခွန်၊အိမ်ခြံမြေ၊ကွာရှင်းခြင်း၊အမွေဥစ္စာ၊ကား၊မူပိုင်ခွင့်၊ခုံသမာဓိလူဝင္မႈ၊အလုပ္သမား၊လူထုအခြေပြု၊ရာဇဝတ်၊အုပ်ချုပ်ရေး၊အာမခံ၊စားသုံးသူနှင့်အခြားဥပဒေရေးရာကိစ္စရပ်များနှင့်ဥပဒေရေးရာအငြင်းပွားမှုများ။ ဥပဒေရေးရာအကူအညီနှင့်အခမဲ့ဥပဒေရေးရာအကြံဉာဏ်အားဖြင့်ဖုန်းမှရရှိနိုင်။ ဥပဒေရေးရာအကြံဥာဏ်နှင့်ဥပဒေကြောင်းအရကိုယ်စားပြုမှုကိုသင်ရနိုင်အခမဲ့များအတွက်အနည်းငယ်ရိုးရှင်းသောနည်းလမ်းများ:လွတ်လပ်စွာခေါ်ဆိုခြင်းဖြင့်ဖုန်းဖြင့်အခမဲ့ဥပဒေရေးရာအကြံဉာဏ်(အကျင့်အမှုပတ်နာရီကိုဘဲအားလပ်နှင့်တနင်္ဂနွေ)၊သို့မဟုတ်ဖြည့်စွက်ပုံစံအတွက်ပဏာမလျှောက်လွှာအခမဲ့ဥပဒေရေးရာအကြံဉာဏ်အွန်လိုင်းပေါ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်(အလုပ္ခ်ိန္)၊ဤကိစ္စတွင်အတွက်၊ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ရေးရှေ့နေအမည်ဖြစ်နိုင်ပြင်ဆင်ထားရန်အတွက်ကြိုတင်ပြီးအကြံပေးဖို့သင်နောက်ထပ်သင်၏မေးခွန်းအပေါ်။
အခမဲ့ဥပဒေရေးရာဝန်ဆောင်မှု လူမှုရေးဥပဒေကိုကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုထောက်ပံ့ပေးအခမဲ့ဥပဒေရေးရာအကြံဉာဏ်နှင့်ဥပဒေရေးရာကိစ္စရပ်များ: အငြင်းပွားနှင့်အတူဘဏ်များ-မကောင်းတဲ့ချေးငွေများ၊ခြိမ်းခြောက်မှုပြုကြသည်၊ပြဿနာများနှင့်အတူများ၏ပေးခြင်းမပြုအပ်၊အကျိုးစီးပွားနှင့်ပြစ်ဒဏ်များ; ခံရမှု၊တရားမဝင်လုပ်ရပ်၏အရာရှိများ၊ဥပဒေဘက်တော်သားအရာရှိများနှင့်အရာရှိ; ကိုင်အခွင့်အပညတ်တရား-ပ်ာ္ရႊင္တဲ့ထုတ်ပယ်၊အလုပ်သမားအငြင်းပွားမှုများ; အငြင်းအကြောင်းပိုင်ဆိုင်မှု၏တရားမဝင်ဆင်းရဲ၏အခြင့္အေရးမ်ား; နှင့်အများကြီးပို။ ကြည့်ရှုကြကုန်အံ့ရဲ့အချက်အလက်မျက်နှာကိုအတွက်။ ကျယ်ပြန့်အများစု၏နိုင်ငံသားမဟုတ်ကြဘူးငါသိ၏ဥပဒေများနှင့်မစောင့်။ အရမ်းကာရော၏၊ထိုတရား၏ထိုဘဏ်များနှင့်မတရားမှုအပေါင်းတို့အတွက်မြား၏ဘဝအသက်တာ-လူပန်းဖြစ်ကြ၏ဤအရာအားလုံးမရှိတော့ယုံကြည်။ ဒါပေမယ့်အရာရှိများ၊အလုပ်ရှင်များ၊ဘဏ်များမှဆက်လက်အကျိုးဆိုတဲ့အချက်ကိုမှလူဦးရေသိရပါဘူး။ နှင့်အချပါငြိမ်ဝပ်စွာနေ၊ဒါကြောင့်ဆက်လက်လိမ့်မည်။ နေသမျှကာလပတ်လုံးသင်ခွင့်ပြု။ ဒါပေမယ့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့သင်လိုအပ် ဒီလိုလုပ်ဖို့၊နိုင်ငံသားဖြစ်ရမည်အကြောင်းကြားသူတို့၏ဥပဒေရေးရာအခွင့်အရေးနှင့်သိသင့်ဘယ်လိုအရေးယူဆောင်ရွက်ရန်အတွက်ပေးထားသောအခွအေနေ။ နှင့်အတူဤရည်ရွယ်ချက်အတွက်၊ငါတို့ဖန်တီးခဲ့ကြကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမှုရေးနှင့်ဥပဒေရေးရာကုမ္ပဏီဘယ်မှာကျနော်တို့အကူအညီနိုင်ငံသားများအတွက်ဥပဒေရေးရာကိစ္စရပ်များနှင့်သင်ပေးဖို့သူတို့ကိုဥပဒေကြောင်းအရစာတတ်ေြမာက်။ အကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်အဆိုပါကုမ္ပဏီ ရှေ့နေများလူမှုဥပဒေရေးရာကုမ္ပဏီ၏လယ်ပြင်တွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်ဥပဒေရေးရာအကူအညီများအတွက် ၁၀ အနှစ်။ အချိန်ကာလအတွင်းကျွန်တော်တို့ကျော်ကောက်ယူ ၃၀၀၀ ဥပဒေရေးရာကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အထက်ကို ၁၀၀၀ စမ်းသပ်မှုတွေအမျိုးမျိုးအတွက်ဒေသများ။ သင်တကယ်ကူညီ။ ပင်အခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးအဘို့၊သင်ကသင့်ရဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်။ ထို့အပြင်အတွက်အတိုင္ပင္ေ၊သင်လက်ခံရရှိလိမ့်မည်အားလုံးလိုအပ်သောတရားဝင်စာရွက်စာတမ်းများ၊ဆုံးနဲ့အရေး၊ခြေလှမ်းညွှန်ကြားချက်များအားဖြင့်ခြေလှမ်း:ဘာလဲ၊ဘယ်လိုသောအခါထိုသို့ပြုမှ။ ဖြေရှင်းဥပဒေရေးရာပြဿနာများ၏မည်သည့်ရှုပ်ထွေး။ ထို့အပြင်အတွက်ကျယ်ပြန့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အတွေ့အကြုံ၊ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများဆန်းသစ်အတွေးအခေါ်။ ထဲသို့ဝင်သောမည်သည့်အငြင်းပွားနှင့်အတူပြည်နယ်နှင့်ကာကွယ်သင့်အကျိုးကိုအနိုင်ရသည်။ အလုပ်လုပ်ဖို့တာဝန်သိ။ တာပဲဖြစ်ဖြစ်အခမဲ့ဥပဒေအကူအညီအွန်လိုင်းသို့မဟုတ်စီမံခန့်ခွဲမှု၏ရှုပ်ထွေးသောကိစ္စများတွင်၊ကျနော်တို့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်သင်၏မျက်နှာနဲ့အလုပ်အဖြစ်။ ကျွန်မတို့အတွက်စိတ်ချယုံကြည်၏အရည်အသွေးကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စွမ်းရည်ကိုသင်ကူညီ။ ထိုသို့သောအာမခံချက်ကြသည်ကျနော်တို့ခွင့်မပြုလုပ်တစ်နှစ်ခွဲနှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်။
အခမဲ့ဥပဒေကြောင်းအရတိုင်ပင်ဆွေးနွေး ခေတ်သစ်အသက်တာ၌နိုင်သောအချိန်လေးနှင့်နေရာအခြေအနေဆိုးရွားရွားလိုအပ်သောအရည်အချင်းဥပဒေကြောင်းအရအကြံဉာဏ်။ ၏တိကျသောသတ်မှတ်ချက်အသိပညာ၏အတိုင်းအတာထက်တရားဝင်စံ၊ပိုင်ထိုက်သောအပညတ်တရား၏၊လက်တွေ့ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အတွေ့အကြုံအခွင့်အရှေ့နေရှာတွေ့ဖို့အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းချက်ကိုလုနီးပါးဆိုအခြေအနေ။ ယနေ့အခြေအနေကိုအတော်လေးကွဲပြားခြားနားသည်။ မလိုအပ်အရပ်၌တန်းစီသို့မဟုတ်ရက်ချိန်းများအတွက်ဥပဒေကြောင်းအရအကြံဉာဏ်တွေ အင်တာနက်ကိုဖြေရှင်းနိုင်တွေအများကြီး၏အရှေ့ဖွင့်လှစ်သင်န့်အသတ်ဖြစ်နိုင်ခြေ။ အလုပ်ရပ်တွေအတွက်ရှေ့နေများ၏အများအပြားအခြေအနေခွင့်ပြုရရှိရန်လိုအပ်သည့်ကျွမ်းကျင်သူအကူအညီအတွက်ဖြေရှင်းရန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊ဒါပေမယ့်လည်းပေးအပ်သောဥပဒေရေးရာအသိပညာ။ ဥပဒေကြောင်းအရအကြံဉာဏ်၊ဥပမာအားဖြင့်၊သင်အားငါပေးမည်အခွင့်အရေး၊အိမ်ကနေရုံးကိုတုံ့ပြန်ရန်အများဆုံးအရေးပေါ်နှင့်အရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတွေ။ ကျေးဇူးတင်ဖို့အချိန်မီအမှုကိုရှေ့နေ၊သင်ဒုက္ခဆင်းရဲကိုရှောင်ကြဉ်ရွိဖို့လုံခြုံတည်ငြိမ်သောတရားဝင်အဆင့်အတန်းအတွက်စေ့စပ်ညှိနှိုင်းနှင့်အတူအကြွေးနှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းသည္။ အသီးအသီးရှိမှု၊အသိပညာများဥပဒေကိုဖြေရှင်းပေးတာ။ အရည်အသွေး၏ဥပဒေရေးရာဝန်ဆောင်မှု၊အရည်အချင်းများ၏ရှေ့နေတစ်ဦး၊အခမဲ့ဥပဒေရေးရာအကြံဉာဏ်လာသည်ကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံသားများအနေနဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ချက်အတွက်အောင်မြင်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်အပုံမှန်ဘဝ။
အခမဲ့ဥပဒေအကူအညီ ရှိခြင်းအကျယ်ပြန့်အတွေ့အကြုံအတွက်ဥပဒေကြောင်းအရအလယ်၊အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်အလေ့အကျင့်၊မတိမှ၎င်း၏ဖောက်သည်၊»တောင်ရွှေ»နှင့် ၁၀၀ အာမခံချက်အပြုသဘောအကျိုးရလဒ်။ ငါကြိုးပမ်းလေ့လာဖို့သတင်းအချက်အလက်ပေး၊နားလည်ဖို့အားလုံးတစ်ခုလုံးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့မှပေးအိမ်ဟောအနာဂတ်အတွက်ရလဒ်။ ေကနဦးဥပဒေကြောင်းအရအကြံဉာဏ်ငါမယူကြဘူး။ ငါဟာအလွန်စိတ်ချယုံကြည်ကြောင်းအလြတ္ေပေါ်ပေါက်သင့်ပါတယ်၏ပြီးစီးအပေါ်သို့အလုပ်မလုပ်၊နှင့်ကြိုးစားမှတင်းကြပ်စွာလိုက်နာဖို့ဒီနိယာမ။ ၏ကနဦးအဆင့်မှာဖောက်သည်အပြန်အလှန်၊ဒီတော့ဟောပြော»သောအခါအစည်းအဝေး»ကိုတည်ထောင်တစ်ဦးယုံကြည်မှုဟာ၊ကျွန်တော့်အမြင်အတွက်၊အခမဲ့ဥပဒေရေးရာအကြံဉာဏ်ပေါ်တရားအားလုံး၏အကျိုးစီးပွားကိုအလိုင်း၊ပြဇာတ်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍ။ အထူးသဖြင့်ယခုအခါတွင်အများနှင့်တန်းတူဖွံ့ဖြိုးပြီးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအကြားယှဉ်ပြိုင်မှုအမည်ဖြင့်»အတု»။ ငါ့အကြံဥာဏ်များအခမဲ့လိုသင်လူတစ်ဦးမှာမှလာမယ့်ဧည့်ခံ၊အဘို့အအွန်လိုင်းစောင်။ အရည်အသွေး၏အပြီးသတ်ရလဒ်ပုံစံများ၏ဆက်သွယ်ရေးကိုမထိခိုက်ပါဘူး။ အကိုရွေးချယ်ပါသင့်လျော်သောရွေးချယ်မှုသင်တို့အဘို့အနှင့်အဆက်အသွယ်ကြောင့်၊အချို့ကိစ္စများစောင့်နိုင်
အခမဲ့ဥပဒေအကူအညီ မှုကြောင့်ဆိုတဲ့အချက်ကိုမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်အဝန္ေဆာင္မႈက»အခမဲ့ဥပဒေအကူအညီ»၊ကျွန်တော်အကြံပေးနိုင်ပါတယ်အများကြီးပိုပြီးလိုအပ်သူတွေကိုကူညီပါ။ လူတိုင်းမလုပ်နိုင်လာဖို့အမေရိကန်အတွက်စောင့်ဆိုင်းနေအခန်း၊အစဉ်အခမဲ့အွန်လိုင်းဥပဒေရေးရာအကြံဥာဏ်ကိုလိုအပ်မှသာပို့ပေးရန်တောင်းဆို။ အလွန်မကြာခဏအခမဲ့ဥပဒေရေးရာအကြံဉာဏ်လာများအတွက်အသုံးဝင်၏ဆွေမျိုးသားချင်းများလူတွေရဲ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခဲ့ကြသကဲ့သို့၊ယောက်ျားသည်မိမိမပြုစေခြင်းငှါကိုတစ်ဦးတောင်းဆိုချက်ကိုပေးပို့ပါ။ ဤကိစ္စတွင်အတွက်ဥပဒေကြောင်းအရအကြံဉာဏ်အတွက်အခမဲ့အွန်လိုင်းခဲ့သည်၊အများဆုံးအသုံးဝင်၊သင်လိုအပ်ရှင်းလင်းစွာရေးဆွဲအမေးလျှင်၊သင်ပူးတွဲဖတ်စာရြက္စာတမ္းအတည်ပြုနိုင်ပါတယ်ချိုးဖောက်။ အွန်လိုင်းဥပဒေရေးရာအကြံဥာဏ်များအတွက်အခမဲ့ကူညီများစွာသောလူသူတို့ဘဝတိုးတက်ဖို့၊ကိုခုခံကာကွယ်သူတို့ရဲ့အခွင့်အရေး၊နိုင်မှအလုပ်ရှာတွေ့၊အခမဲ့သင်ယူဖို့။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဥပဒေကြောင်းအရအကြံဉာဏ်အတွက်အွန်လိုင်းအခမဲ့ထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိသည်အားဖြင့်အရည်အချင်းပြည့်ဝန်ထမ်းသောသူဂရုတစိုက်ဆန်းစစ်တိုင်းတောင်းဆိုဖို့အဖြေကအများဆုံးပြီးပြည့်စုံ။ သင်အမြဲဆက်သွယ်ပြီးအပေါ်မည်သည့်အရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုများ၊ဥပဒေကြောင်းအရ။ ပါကသင့်အခွင့်အရေးချိုးဖောက်နေကြတယ်၊မဟုတ်ကြဘူးဘယ်မှာသိရန်အလှည့်ကိုကူညီအခမဲ့ဥပဒေရေးရာအကြံဉာဏ်။
အခမဲ့ဥပဒေရေးရာအကြံဉာဏ် နှင့်အတူအတွေ့အကြုံနှစ်ပေါင်း၊အခမဲ့ဥပဒေရေးရာအကြံဉာဏ်ပေးအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ၊အမြဲတမ်းလိုက်နာနှင့်အတူလက်ရှိဥပဒေ။ ကျွန်မတို့ရှာဖွေဖို့သင်မည်သို့တရားဝင်လမ်းထွက်၏ပင်အရှုပ်ထွေးဆုံးနှင့်၊ပထမတစ်ချက်မှာ၊တစ်ကူကယ်ရာမဲ့အခြေအနေ။ ဒါဟာကမ်းလှမ်းအခမဲ့ဥပဒေရေးရာအကြံဉာဏ်အပေါ်ပြည်တွင်း၊မိသားစု၊အမွေဥစ္စာ၊အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီးပွားရေးရာ။ ထို့အပြင်၊သင်သည်လည်းတစ်အခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနှင့်အတူဇဝတ်သားကာကွယ်ရေးရှေ့နေအကဲဖြတ်နိုင်သူအခြေအနေ၊အကူအညီကနဦးအဆင့်မှာရွေးချယ်ဖို့အများဆုံးအကောင်းဆုံးအဥပဒေရေးရာအနေအထား၊ဘယ်လိုရှင်းပြနှင့်အယူခံဆန့်ကျင်တရားမဝင်လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်များကို၏အလောင်း၏ပဏာမစုံစမ်းစစ်ဆေးမှု။ အဖိုးအခမဲ့အကြံဉာဏ်ကနေရှေ့နေတစ်ဦးအတွက် ဖြစ်ပျက်ရန်ဖြစ်ရပ်များအတွက်အခါစေရန်လိုအပ်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်အချိန်မှာဥပဒေကြောင်းအရဆုံးဖြတ်ချက်၊ဥပမာအားဖြင့်၊၏ဖြစ်ရပ်အတွက်အသွားအလာမတော်တဆမှု၊ထိန်းသိမ်း၊ရုတ်တရက်မဆန်သောလုပ်ရပ်များကို(ရှာဖွေ၊လေဖြတ်)။ လည်း၊ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှု၏အသုံးပြုမှုကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းအတွင်းဥပမာ၊ပိုက္လိုင္းအားဖြင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းသည္။ အတော်လေးမကြာခဏအခြေအနေရှိပါတယ်သည့်အခါ၎င်း၏မှန်ကန်သောအကဲဖြတ်လိုအပ်ချက်များဆန်းစစ်ဖို့လိုင်းရဲ့။
အခမဲ့ဥပဒေရေးရာအကြံဉာဏ် အတွက်ဥပဒေပြည်နယ်နိုင်ငံသားတိုင်းမဖြစ်မနေကာကွယ်ခံစားရ။ ယခုမူကားအကြားအလွန်အမင်းကြီးမားသောထောက်ပံ့ရေး ။-ဝန်ဆောင်မှုများကိုအတော်လေးအနည်းငယ်အရည်အချင်းပြည့်နှင့်အဘို့အရရှိနိုင်တဲ့အသုံး။ နှင့်အတူကန့်သတ်နှင့်အသေးစားဘဏ္ဍာရေးဝင်ငွေ၏မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးရရှိရန်ကြိုးစားနေအကျွမ်းကျင်တရားဝင်ကာကွယ်ရေးအဖြစ်တတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးနှင့်စျေးနှုန်းချိုသာ၊အစဉ်အပြည့်အဝကောင်းစွာသိကြောင်းစျေးပေါဒိန်ခဲနိုင်စေသာအ ။ မည်မျှစိတ်ပျက်ကြ၏အသားနှင့်အချိန်ကြာမြင့်စွာအဘို့အကြောင်းစဉ်းစားဘယ်မှာရှာတွေ့မှအခမဲ့ဥပဒေရေးရာအကြံဉာဏ်။ ကံမကောင်းစွာ၊အဆိုပါအထူးကုသတ်မှတ်ထားကိုယ္ေ၊မုချ၊»မိုက်သောသဘော»၊အရာနောက်ပိုင်းတွင်အဘို့အရှိသည်တစ်ဦးအလွန်ရှည်လျားအချိန်ပေးဆောင်ဖို့။ အခုအစိုးရဖစ္ေရွေ့အတွက်ဥပဒေနည်းလမ်း၊ထို့ကြောင့်နိုင်ငံသားတိုင်းအတွက်မျှော်လင့်ချက်တစ်ပွဲ၏တရားမျှတမှု။ ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိကြသောရောဂါတားဆီးနိုင်သို့မဟုတ်အလျင်အမြန်ပျောက်ကင်းအောင်ကုသလျှင်ကျနော်တို့သွားဖို့ဆရာဝန်နှင့်ကုသမခဲ့သည်။ ဒါ့အစည်း၏တရားဝင်အမည်ဖြစ်သည်။ နှင့်ပိုပြီးကျွန်တော်တို့အတွက်ယုံကြည်မှုကျွန်တော်တို့ရဲ့အစွမ်းသတ္တိနှင့်ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဆွဲတစ်ခုမှအယူခံရှေ့နေရှေ့နေများအတွက်အကူအညီ၊အခက်ခဲပါလိမ့်မည်လွန်းနှောင်းပိုင်းမှမှန်ကန်သောအခြေအနေနှင့်ထိုကဲ့သို့သောနှောင့်နှေးလိမ့်မည်သိသိသာသာထိပိုက်ဆံအိတ်လိမ္မာလိမ္မာ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာ၏အပြည့်အဝမ့္မယ္၊နှစ်ဦးစလုံးအပြုသဘောနှင့်သာယာသောမဟုတ်။ အတာနဲ့နေတာတွေ့အမျိုးမျိုးအတွက်ခန့်မှန်းရခက်အခြေရာအတွက်အကူအညီမပါဘဲသင်တစ်ဦးရှေ့နေများ၏ရုံတွေကိုမရပါဘူး၊နှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်၊ကောင်းတစ်ခုရှေ့နေစရိတ်ငွေအများကြီး။ ပထမဦးစွာကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်ချက်ကိုဆန္းမှတ်တမ်းတွင်က်ဘ်ဆိုက်နှင့်အမျိုးအစားရှာဖွေရေးအတွက်»ဥပဒေအပေါ်အကြံဉာဏ်ကိုအင်တာနက်၊တယ်လက်ခံရရှိပရော်ဖက်ရှင်နယ်အမှန်တကယ်ဥပဒေကြောင်းအရတုန့်ပြန်မှရှေ့နေတစ်ဦးအတွက်သင်၏မေးခွန်း. ဥပဒေကြောင်းအရအကြံဉာဏ်။ ရှေ့နေကိုကူညီအွန်လိုင်းလိုအပ်ဥပဒေရေးရာဝန်ဆောင်မှု၊ကျွန်တော်တို့အတွက်လိုအပ်အမျိုးမျိုးသောအမြားအသက်တာ၏။ သင်သည်ငြိမ်ဝပ်စွာနေစိတ်ချစွာနိုင်အတွက်ကျွမ်းကျင်စွာ၏အဖြေကိုဝက်ဘ်ဆိုက်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့ကကြိုးစားခဲ့တစ်ခုဖန်တီးရန်အင်တာနက်ဆိုက်၊အရာအတော်လေးလွယ်ကူဖြစ်သင့်ကိုသုံးပါနှင့်စျေးနှုန်းသက်သာအတွက်မည်သည့်အသုံးပြုသူမဆိုနှင့်လည်းပရော်ဖက်ရှင်နယ်များအတွက်အင်တာနက်အသုံးပြုသူများ၏နိုင်ငံအားလုံးအတွက်။ ကျွန်တော်တို့ဆန္ဒရှိဖို့အချက်၏အချက်ကိုအာရုံစိုက်သောအစိပ်အပေါ်မှာဤအခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်၊ဒါကြောင့်ရှိမယ့်လိုအပ်ချက်အဘယ်သူမျှမကောင်အထည်ဖေါ်ရန်မည်သည့်ကြိုတင်လွှဲပြောင်းခြင်းနှင့်ငွေပေးချေ။ နောက်ပိုင်းတွင်အဖြစ်အများကြီးတစ်ဦးချင်းစီဥပဒေရေးရာအကူအညီသင်တို့အဘို့အပြဿနာ၊ကိုထိခိုက်မည်မဟုတ်လျှောက်ထားနှင့်ငွေပေးဆောင်ဘို့အပိုပြီးသိသိသာသာမြင့်မားပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဥပဒေကြောင်းအရအကာအကွယ်။ ဒါ့အပြင်ဒီနေရာမှာရနိုင်ဖြေဖို့အားလုံးနီးပါးဒေသများ၏ဥပဒေရေးရာအကြောင်းအရာ၊အပါအဝင်၊သာ၊ဥပဒေရေးရာအကြံဉာဏ်ထွက်ယူသွားတတ်၏အဆိုအရအောက်ပါစံသတ်မှတ်ချက်များ: ပထမဦးဆုံးနှင့်ဗွေဆော်၊အမိန့်၏။ အထူးသဖြင့်၊အမွေဥစ္စာအားဖြင့်ဥပဒေနှင့်လိမ့်မည်၊ဇာတ်ခုံ၏၊အချိန်ကိုက်စဉ်းစား၏စာရွက်စာတမ်းများနှင့်၎င်းတို့၏စာရင်း; ဒုတိယအ၊အငြင်းပွားနှင့်ဆက်စပ်သောအလုပ်အတွက်ဥပဒေကြောင်းအရ။ ယူဆပဋိပက္ခအလုပ်ခွင်တွင်၊ပ်ာ္ရႊင္တဲ့စဲ၊စုပေါင်းအလုပ်သမားအငြင်းပွားမှုများ၊လုပ်ခလစာ၊လူမှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး; တူညီခဲ့သည်။ ဥပမာတစ်ခုအဖြစ်၊တရားကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးထည့်သွင်းစဉ်းစားသည့်အခါဤအမျိုးအစားများ၏ကိစ္စများတွင်၊အခွင့်အရေးများနှင့်တာဝန်ဝတ္တရားများကိုပါတီများ၏ပါဝင်ပတ်သက်; တတိယနေရာ၊ကွာရှင်း။ ယူ၊ကွာရှင်းခြင်း၊အချင်းချင်းကွဲပြားခြင်းသည်နှင့်ဒါကြောင့်အပေါ်; ချက်ချင်းငြင်းနှင့်အတူဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်း။ ဥပမာအားဖြင့်ဆို၊အငြင်းအာမခံ; တွင်စတုတ္ထနေရာ၊ေျမကြက္။ အကြောင်းအငြင်းပွားပတ်သက်ခြင်း; လည်း၊ပြစ်မှုဆိုင်ရာအမှုများနှင့်အခြားဒေသများ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်၊နိုင်ငံတော်စီးပွားရေးမှတ်ပုံတင်ရေး။ ဥပမာအားဖြင့်၊အခက်အခဲအခါလျှောက်ထား။